Roobab mahiigaan ah oo duufaano wata oo la filayo in ay ku dhuftaan deegaan xeebeedyada Puntland - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandRoobab mahiigaan ah oo duufaano wata oo la filayo in ay ku dhuftaan deegaan xeebeedyada Puntland
December 18, 2016 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Roobab mahiigaan ah oo duufaano wata oo la filayo in ay ku dhuftaan deegaan xeebeedyada Puntland. [Sawirka: Puntland Mirror]
Boosaaso-(Puntland Mirror) Roobab mahiigaan ah oo dabaylo culus wata ayaa la filayaa in ay ku dhuftaan deegaan xeebeedyada Puntland ee Badweynta Hindiya maalamaha soo socda, sida ay sheegeen dadka hawada saadaaliya.
Si kastoo ay ahaataba, magaalooyinka gobolka Bari sida Baargaal, Caluula iyo Bareeda ayaa la filayaa in ay helaan roobab wanaagsan.
Dowladda Puntland ayaa uga digtay bulshada kunool xeebaha ku teedsan Baweynta Hindiya in ay u baxaan dhul kore si looga gaashaanto khataro macquul ah oo ay keenaan roobaabkaas duufaanada wata.
December 27, 2016 Baarlamaanka Puntland oo diyaarinaya mooshin ka dhan ah madaxweyne ku xigeenka
Dare Salam-(Puntland Mirror) Ugu yaraan 11 qof ayaa lagu dilay in ka badan boqol kalena waa lagu dhaawacay kadib markii dhul-gariir cabirkiisu uu ahaa 5.7 uu ku dhuftay waqooyiga dalka Tanzania. Dhul-gariirka ayaa ka dhacay [...]